Hihaona «planeta Fitiavana» — maimaim-poana amin’ny aterineto ny fifandraisana amin’ny olona tena avy manerana izao tontolo izao
Te-hahita ny tena tia ny namana tsara indrindra sy mahaliana interlocutor. Mba hifandray am-po ka hanome fifaliana avy amin’ny fifandraisana misy ofisialy Mampiaraka toerana «planeta Fitiavana». Amin’izao fotoana izao, ny vavahadin-tserasera dia vitsy tapitrisa mpampiasa. Maro amin’izy ireo noho ny Fiarahana amin’ny tranonkala mba hahitana namana namorona ny fianakaviana mafy orina. «Planeta Fitiavana» isan’andro, an’arivony ireo mpampiasa fitsidihana. Mijery ny dokam-barotra malaza Mampiaraka toerana tsy nisoratra anarana ary mety amin’izao fotoana izao Ianao mahita ny fanahiny vady namana na mahaliana ny olona ny miresaka. «Planeta Fitiavana» isan’andro, an’arivony ireo mpampiasa fitsidihana. Mijery ny dokam-barotra malaza Mampiaraka toerana tsy nisoratra anarana ary mety amin’izao fotoana izao Ianao mahita ny fanahiny vady namana na mahaliana ny olona ny miresaka. Ny daty, ny Fiarahana amin’ny alalan’ny Internet mandeha isan-karazany ny olona.
Eo amin’ny namany sary ho Fiarahana-fisoratana anarana dia mampitombo ny mety tsy fahombiazana. Izany dia mora ny maka avy miteny fa maro ny masontsivana: Lehilahy mombamomba matetika kokoa, fa ny vehivavy no matetika mavitrika kokoa. Ny maimaim-poana Niaraka mamela anao haka ny mpivady, araka ny fepetra rehetra sy ny endri-javatra. Matetika toa hita fa ny tena fiainana dia ny mahita ny namana na mpiara-miasa no tena sarotra, ny manaraka dia tsy misy iray izay hahatakatra sy hankasitraka. Fa ny zavatra iray hafa dia tsy maintsy misoratra anarana na feno handray anjara amin’ny fiainana ao amin’ny vavahadin-tserasera. Misy tokoa ny olona maro izay mitady ho an’ny tsirairay sy amin’ny alalan’ny famaritana mazava tsara ny tanjona sy ny tsy fisian’ny fari-ny famerana, ny fikarohana ho tsotra ary mahomby. Ny tahirin-kevitra amin’ny ny resume afaka foana ny hanova ny hanao izany dia ilaina ny mitandrina amin’ny vaovao amin’izao fotoana izao. Maro ny olona mampiasa ny site «planeta Fitiavana» Mampiaraka sy ny ho avy ny mifindra any ivelany. Izany dia olana tsy afa-tsy ny vehivavy ihany koa fa ny olona amin’izao fotoana izao tena mahazatra dia ny fifandraisana sy ny fanambadiana izay mamela anao hanova tanteraka ny fiainany. Manirery foana dia tsy hita ao ny tsy fisian’ny mpiara-miasa matetika mila saina ny fifandraisana dia resaka amin’ny olona afaka mizara ny fomba fijery. Raha tsorina dia ny eo ho eo ny olon-dehibe tsy manana fotoana ho an’ny mahaliana fialam-boly. Ankoatra izany, ny isan-karazany ny lohahevitra asa izany na Fialam-boly dia mitaky ihany koa mitana ny vola lany. Mahita mahaliana ny olona mba hanampy ny maimaim-poana ny Mampiaraka toerana. Ny tombony ihany koa ny fiarovana ny Mampiaraka toerana — fisoratana anarana presupposes ny fisian’ny vaovao manokana, fa tsy voatery hanome ny fahazoana ny adiresy ny finday, ary hafa ny fifandraisana vaovao. Noho izany, afa-tsy amin’ny fiaraha-mientana ifampizarana ny faniriana sy ny fahavononana mety hitranga ao amin’ny fivoriana manokana raha tsy izany ny mpiantso dia tsy ho afaka ny hahita Anao. Ny ankamaroan’ny mpampiasa mandany ny fotoana fitia miaraka amin’ny tsara tarehy ny olona. Na dia tanjon’ny fihaonana dia tany am-boalohany ny hafa, na izany aza, ny sasany ny fotoana mandalo ao ny tsy manan-kery ny hafatra. Maro ireo izay te-hianatra tsy andriko ny fifandraisana lava dia lava, fa manomboka kely matetika manana fifandraisana mafy orina. Ny Mampiaraka toerana tsy misy fisoratana anarana maimaim-poana fanampiana mba hahita maro mahaliana ny olona sy ny orinasa noho ny mihantona. Raha ny fisian’ny fifandirana momba ny fari-fototra raha toa ka mila mitory mba hanatrika ny hetsika ara-kolotsaina, na fotsiny mahafatifaty ireo fivoriana nandritra ny hisotro kafe rehefa avy miasa. Tena maro ny mpampiasa aleon’ny mpanadala online raha tsy misy ny tetezamita tena izy, ny fifandraisana. Ity fomba ity dia manampy mba hanangana ny fiheverany ny tenany-hianatra mba mifandray amin’ny mifanohitra amin’izany firaisana ara-nofo mba hanomezana fahafaham-po ny faniriany ho an’ny karazany raha tsy misy ny fifandraisana ara-batana. Toy izany ny fifandraisana mety ho tohanana amin’ny alalan’ny fizarana ny sary ao anatin’izany akaiky ny natiora, ary koa ny lahatsary amin’ny chat. Raha oharina amin’ny fomba nentim-paharazana ny Mampiaraka ny planeta ny fitiavana dia manana tombony goavana eo amin’ny sehatry ny lehibe Mampiaraka — pairing araka ny voalaza masontsivana. Fomba izany dia mamela anao hahita ny mifototra amin’ny zanabolana voalohany indrindra amin’ny hevitra mirindra tsara sy tsy mifototra amin’ny unthinking fangorahana toy ny mitranga matetika eo amin’ny fiainana. Mazava ho azy, ny endriky koa mitana anjara toerana lehibe ka Mampiaraka toerana mahakasika ny fametrahana ny sary sy manontolo albums. Noho izany, afaka hijery ny olona araka ny ny lafin-javatra maro mba hijery azy. Fifandraisana foana mora kokoa rehefa misy ny lohahevitra mahazatra ny fomba fijeriny sy ny Fialam-boly. Rehefa nitsidika ny Mampiaraka toerana ho an’ny fifandraisana matotra tokony mameno ny mombamomba azy araka ny tokony ho izy mba hampisehoana lafiny manan-danja ny fiainany toetra fahazarana ny asa atao. Izany dia ilaina mba hanondroana ny endri-javatra izay tsy maintsy ho ao amin’ny mpiara-miasa dia ho avy hatrany ny ahi-dratsy tsy nety kandidà. Aza matahotra mba hampitahorana eny mety ho mpankafy mangina sy zava — teo amin’ny toerana «planeta Fitiavana» maro be ny mpampiasa dia anisan’ireo izay tena tsy misy dia ny olona izay mitady marina ny Anao, miaraka amin’ny rehetra ny eccentricities sy ny mampihavaka ny. Hametraka ny fiainana ara-nofo fomba tsotra indrindra mba hahita «planeta Fitiavana». Eto ny banky angona goavana ny isan-karazany ny mpampiasa, eo izay misy ny tonga lafatra mpiara-miasa ho an’ny rehetra. Tranonkala dia feno ny mombamomba ny LGBT olona ny olona miaraka amin’ny fironana isan-karazany sy ny zavatra tiany. Raha ny fifandraisana amin’ny aterineto dia mora kokoa ny hanokatra sy hiaiky ny nofinofy ka mora ny misafidy ny mpiara-miasa tsara. Ny afaka manafina ny mombamomba ity karazana Mampiaraka, fa ianao dia tokony mifandray amin’ny tambajotra alohan’ny nanaiky ny fihaonana manokana. Tsy misy ratsy dia avy amin’ny lahatsary izany dia manampy mba hanangana ny heviny momba ny olona iray. Mora ny mahita mpiara-miombon’antoka manerana ny Aterineto noho ny fahatsorany sy ny hafainganam-pandeha avo fifantenana — tsy lazaina intsony ny tena zava-maniry sy ny fepetra takiana ny toe-javatra mety fady sy ny zavatra tiany.
Ny lalao dia tsy ho tonga
Amin’izao fotoana izao travel lasa mora sy azo antoka, fa tsy ny rehetra no afaka hanatanteraka ny fanirianao noho ny tsy fahampian’ny orinasa. Mpiray fitsangatsanganana dia tsy mahafinaritra, fa izany matetika no mora kokoa, ary mora vidy kokoa. Ny mahita ny mpiara-mitory (na manontolo ny orinasa) noho ny antony hanampy ny toerana ho «planeta Fitiavana». Na raha toa ka ny tanjona dia ny fitetezam-paritra manodidina ny tanàna eto dia afaka mahita mendrika zanabolana ity. Maro ny olona nofy lavitra ampitan-dranomasina ny firenena, fa ny manodidina azy no tsy sahy fanohanana. Io dia io no tsara atao amin’ny mahaliana mitovy izay mamela ny mahita ny planeta tia Mampiaraka toerana. Eo amin’ny mpampiasa dia misy ny tahotra, dia lavitra za-draharaha sy ny kely saina fa marisika ny olona.
Ho ambony indrindra ny fampiononana, mora ny maka ny mpiara-taona
Lahy sy ny vavy dia zava-dehibe ihany koa — dia mety hitondra ny olona iray ho an’ny olon-tiany, na miteraka ny fahatsapana ny mpivady mba hanamora ny fisoratana anarana, ohatra. Na miray hina isika noho ny nandresy hafa ny fon ‘ ny olona ary ho azo antoka ny am-pilaminana ny diany raha tsy misy ny fiaraha-pitiavana niainany. Koa ny tranonkala ho fomba lehibe mba hahita ny olom-pantatra eo anivon ‘ ny mponina ao an-toerana. Mba hahazoana mahafantatra tsara ny mponina ao an-toerana no tena mety satria izany dia afaka ny ho mpitari-dalana mpanampy mpanolo-tsaina ny namana ary angamba zavatra bebe kokoa. Na inona na inona ny tanjony ny vohikala dia ny hanampy ny olona mba hitady ny sahaza Mampiaraka. Ny olona rehetra dia afaka Maneho ny tenany mba hanary ny itambaram-be sy ny fitsarana an-tendrony ny hanandrana zavatra vaovao mba hanokatra ny tontolo izay misy toerana ho an’ny olon-drehetra, na inona na inona tiany fivavahana fironana faha-lahy sy ny vavy lanjan’ny sy ny sata ara-panambadiana.
Sonia ny ankehitriny sy ny ho lasa akaiky kokoa ny fahasambarana
← Italia Chat Room - izao Tontolo izao Hiresaka maimaim-poana amin'ny aterineto hiresaka amin'ny Tontolo Chatters
Italia Chat Room FREE Italia Chat Room Tsy misy fisoratana anarana →